मैले चिनेको शेरबहादुर देउवा
सबैले बुझ्नुहोला, अहिले नबोली–नबोली मिति पुर्याउन सक्ने अनुभवी सिजण्ड बिपी, कृष्णप्रसाद, गणेशमान गिरिज जस्ता श्रद्धेय संस्कारी नेताहरूको सत्संग र संगत गरेका नेता शेरबहादुर देउवा हुन् । यिनले राजनीति सिकेका गुरूहरूअब्बल थिए । यिनी बेलायतमा पनि पढेका हुन् । टियूमा पढ्दा नेविसंघको सभापति पनि थिए ।
आफू गरिव साधारण परिवारमा, दुर्गम डडेलधुराको दुर्गम गाउँमा जन्मेर पनि शेरबहादुर देउबाले आफूले आफैलाई बनाएका ‘सेल्फ मेड’ हुन् । कसैको आशिर्वादले बनेका नेता होइनन् । त्यसरी जसरी बिपी नेता बनेका हुन् । राजनीतिक संस्कारीहरूको सही संगत पाउनु यिनको भाग्य र कर्म हो ।
सत्ता राजनीति कसरी चलाउनुपर्छ यिनले आफ्ना अग्रजबाट राम्ररी सिकेका, जानेका छन् । संगठन गर्न पनि चतुर र सफल छन् । सत्ता साझेदार दलका नेताहरू सबैलाई मिलाउन पनि खप्पिस छन् । यिनी लहैलहैमा कसैको पछि कुद्दैनन् । नबोले पनि चुपचाप बसेर सबैलाई मिलाउन भने सक्छन् । यिनका अगाडि पर्दा यिनका सबै कार्यकर्ता र परिवारका सदस्यसमेत पनि डराउछन् ।
गिरिजाप्रसाद कोईराला जस्ता टावरिंग र नबोल्ने कोईराला परिवारसंग टक्कर लिने हिम्मतले गरेरै यिनी यसरी गिरिजाप्रसाद जतिकै पॉच पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्, लुरूलुरू पछि लागेर हैन ।
यिनले नयॉ दल खोले, पुरानोसंग पुनः एकिकरण गरे, अनि प्रधानमन्त्री भए, सभापति भए र अझै सभापति छन् । अरू कुनै दलका नेता यसरी दल फोडेर गएपछि पुनः एकिकरण गरेर, एकिकृत दलको सभापति र प्रम भएको पाईदैन । बामदेव, महन्थ, उपेन्द्र र बाबुरामलाई हेर्नुस् । शेरबहादुर अपवाद हुन् ।
यिनी त एकिकृत नेकॉको एकछत्र नेता बन्न आजसम्म सफल भएका छन् र अझै पनि यिनलाई टक्कर दिन सक्ने दलभित्र कोही नेता देखिदैनन् । अब बुढा पनि हुदै गएका छन् । तर, यति धेरै अवसर पाएर पनि शेरबहादुर देउबाले मुलुकलाई ठोस योगदान दिन सकेको देखिएको छैन । तर, यिनी प्रम हुँदा विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको सहयोग बामपन्थीहरूलाई भन्दा कैयन गुणा बढी हुन्छ नै ।
शेरबहादुरका समान उमेरका दौतरी नेताहरू दलमा र बाहिर पनि कोही छैनन्, सबै जुनियर छन् । त्यसैले दलभित्र ईगो फाईट छैन जस्तो एमाले, माओवादी, मधेशी दलहरूमा छ, जहॉ कसैले कसैलाई टेर्दैनन् किनकी सबै जस्तो समकालिन छन् । त्यसैले शेरबहादुर सबैभन्दा धेरै उमेर फरक भएको दलभित्र र बाहिर जेठा नेता पनि हुन्, एकदम सक्रिय शिर्ष जीवित सिनियर नेताहरूमध्येमा ।
उनको काम गर्ने शैली यस्तो रहेको मैले भोगेको छु । सरकारमा सहभागी रहेका दलहरूका कुनै मन्त्रीको काममा यिनले खासै हस्तक्षेप गरेको मेरो अनुभवमा छैन । सबैलाई स्वतन्त्र छाड्छन् । पटक्कै बोल्दैनन्, कुरा गर्न गयो ठिक छ, ठिक छ, बुझेँबुझेँ मात्र भन्छन् । यी मुसुक्क हॉसेको देख्न पाउदा पनि कुरा बुझे होलान् भनेर सन्तोष गर्नुपर्छ। अरूसंग हास्नै नचाहने मसंग कुरा गर्दा मुसुक्क परेको पाएको छु । सबै कुरा बिर्सन्छन् जस्तो लाग्छ र बिर्सन्छन् पनि। भेटेपछिको पिरलो नै यही हो, बिर्सने भएपछि भेटेर भनेको कुराहरूको के अर्थ ? के काम ? सबै कुरा यिनका युवा सहयोग पीए भानु देउबाकै भरमा हुन्छ जस्तो लाग्छ । भानुले गरिदिए काम बन्यो नत्र भेटेको मतलबै नहुने । मेरो निजी काम भने बनाउन कहिल्यै परेन, सरकारी काम बने प्रम उनकै सुनाम हुने हो ।
सरकारी वा राजनीतिक समन्वय पत्नी आरजु राणाले गर्छिन् जस्तो लाग्छ ।श्री ३ मोहन सम्शेरकी नातिनी भएर पनि आरजु राणा ज्यादै मिलनसार, सिम्पल, सहज ब्यवहारकी लाग्छ । यिनले सबैलाई पदले मान गरेरै सम्बोधन गरेको भेटेको छु । आरजुको मीठो बोली छ, बडप्पन देख्दिनँ । हुन त मेरो केही काम परेको पनि छैन तर पनि जागिरमा हुदा सरकारी कामले मेरै मन्त्रालयको बिभागीय मन्त्री भएका कारणले प्रम शेरबहादुर देउबा, आरजु राणा र भानु देउवासंग बेला बेला भेट गर्न पर्थ्यो नै । बस् यति हो मेरो चिनजान ।
(लेखक नेपाल सरकारको पूर्वसचिव हुन् ।)